सोह्र श्राद्ध (पितृ पक्ष)मा यी ७ काम गरे हुन्छ धनधान्य र समृद्धिको वर्षा - Everest Dainik - News from Nepal
सोह्र श्राद्ध (पितृ पक्ष)मा यी ७ काम गरे हुन्छ धनधान्य र समृद्धिको वर्षा
काठमाडौं । आजभोली पिृत पक्ष अर्थात् सोह्र श्राद्ध चलिरहेका छन् । हिन्दु मान्यता अनुसार, यो समय निकै शुभ मानिन्छ । यो बेला पितृहरु अदृश्यरुपमा हाम्रो वरिपरि रहेका हुन्छन् ।
पुराणमा उल्लेख भएन अनुसार, यो समयमा यमराजले पूर्वजहरुलाई आफ्ना परिजनसँग भेट गर्न मुक्त गर्छन रे । त्यसैले उनीहरुको श्राद्ध र तर्पण विधि गरेर प्रसन्न गर्ने गरिन्छ ताकि उनीहरुको आत्माले शान्ति पाओस् ।
यदि मर्ने व्यक्तिको श्राद्ध गरिएन भने उनीहरुको आत्माले शान्ति पाउँदैन । उनीहरु दुखी र निराश हुन्छन् । त्यसैले पितृ पक्षमा श्राद्धको तिथी निर्धारण गरेर ब्राम्हणलाई भोजन गराइन्छ ।
पितृ पक्ष निकै शुभ समय हुन्छ । आफन्तसँग भेट गर्न आएपछि जाँदा खेरी सुख समृद्धि र ऐश्वर्यको आशिर्वाद दिएर जान्छ ।
शास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार, पितृ पक्षमा केही यस्ता काम गर्न सकिएमा माता लक्ष्मीको कृपा सधैं बनिरहन्छ । पितृहरु पनि शुभ आशिष दिएर जान्छन् । यी कार्य गर्दा बिग्रेका काम बन्ने मात्र नभई पितृदोष पनि समाप्त हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस सोह्र श्राद्ध तिथिमा पितृप्रसाद खाँदा २७ जना बिरामी
के के गर्नुपर्छ त ?
१. पितृ पक्षमा सधैं मानिसको मृत्यु भएकै तिथीमा श्राद्ध गर्नु पर्दछ ।
२. मृत्यु तिथीमा ब्राम्हणलाई भोजन गराउनुस र यदि साथमा ज्वाईं, नाती या भान्जालाई पनि समावेश गरियो भने त्यो अझ उत्तम मानिन्छ ।
३.भोजनपछि सबैलाई यथाशक्ति धन दक्षिणा दिएर उनीहरुलाई विदा गरी आशिर्वाद लिनुपर्दछ । यसो गर्दा पितृ प्रसन्न भइ पितृदोष पनि समाप्त हुन्छ । र बिग्रेका काम पनि बन्छन् ।
४. सोह्र श्राद्धमा सधै पितृहरुको नाममा जल तर्पण गर्नुपर्दछ । यदि सम्भव हुन्छ भने हरेक दिन र सम्भव नभए श्राद्धको दिन परेवा र कौवाका लागि भोजनको एउटा भाग निकालेर घरको छतमा राख्नुपर्दछ । मान्यता छ– श्राद्ध पक्षमा कौवालाई तपाले दिएको अन्नलाई कौवाले बोकेर उ सोझै पितृहरुसमक्ष पुग्छ रे । यसो गर्दा पितृहरु प्रशन्न हुन्छन् । उनीहरुको आत्माले शान्ति पाउँछ । यसबाट घरको सुख समृद्धि पनि बढने गर्दछ ।
५. पितृ पक्षमा गर्नुस् पञ्च ग्रास दान
श्राद्धको दिन पञ्चग्रास दानको विशेष महत्व छ । पञ्चग्रास दानमा गाई, बिरालो, कौवा, कुकुर र सुनसान स्थानमा भोजनको एकएक भाग राख्नुपर्दछ । र फर्किंदा पछाडि हेर्नुहुँदैन । यसबाट पितृहरु प्रसन्न भएर वंशजहरुलाई स्नेह र आशिर्वाद दिने गर्दछन् ।
६. पितृ पक्षमा नयाँ कपडा, गाडी र गहना किन्नु शुभ हुन्छ ।
७. पितृ पक्षमा घरमा कोही अतिथी या आवश्यकता परेको व्यक्ति तपाईको ढोकामा आयो भने उसका लागि आदरपूर्वक भोजनपानीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ र जाँदा खेरी खाली हात नफर्काउनुस् । हाम्रा पितृहरु कुनै पनि रुप लिएर हाम्रो ढोकामा आउन सक्छन्, त्यसैले यस्तो बेला कसैको पनि उपेक्षा गर्नु हुँदैन ।
ट्याग्स: पितृ पक्ष, सोह्र श्राद्ध